Mpanamboatra sy rindrambaiko rindrin'ny rindrina tsara indrindra | Media
Mpamorona maro no manantena ny hamolavola varavarankely lehibe toy ny rindrina ambainy. Ity no niandohan'ity rafitra fikandrana ity!
Ny fiarovana azo antoka dia azo antoka amin'ny alàlan'ny hatevin'ny rindrina 2.0mm, ny lakan-drano misy patanty miaraka amin'ny hidy marobe, ny sisin'ny sashand mifanitsy, ary ny mullion manamafy 120mm sns.
Ny efijery misidina miafina dia mihaona amin'ny hatsarana hita maso sy ny asan'ny anti-moka. Ny rafitra tsara dia miahy ny antsipiriany rehetra!
SISTEMAN'NY WALL CURTAIN
Ny rafitra rindrin'ny rindrina lamba MEDO dia mampanan-karena ny lisitry ny varavarana sy ny varavarankely, manome vahaolana famolavolana manokana ho an'ny fiainana an-trano. Ireo singa ao amin'ny rafitra vaovao dia manafaingana tokoa ny fanodinana atrikasa, ahafahan'ny fikorianan'ny fanodinana mahomby kokoa. Safidy fampiharana marobe no misy: ny vokany mangarahara indrindra, ny sakany amin'ny halavan'ny maso ary ny fiasa mahery. Ny rafitra manavao ny sash sy ny firafiny dia miteraka vokatra mangarahara lehibe indrindra: tontonana miorina sy tontonana azo sokafana dia mitovy amin'ny ivelany, izay tsy mbola nisy toa azy teo amin'ny sehatry ny fananganana manontolo.
MEDO Residential Curtain Wall Systems dia manome vahaolana namboarina manokana ho an'ny tetikasa sy ny toerana misy ny tranokala.
Endri-javatra ho an'ny trano mihaja
Ny rafitra rindrina amin'ny rindrina dia tonga lafatra amin'ny famoronana trano misy fitaratra lehibe, ny haavon'ny trano rehetra dia afaka mahazo tombony avy amin'ny gorodona ka hatramin'ny valin-drihana misy gorodona maromaro ary na dia mipetrapetraka eo ambanin'ny tampon'ny tampon-trano aza ny zoro.
Fiasa fitaratra miovaova
Famolavolana firafitra misy gorodona roa
Drafitra firafitry ny lavarangana roa miaraka amin'ny rafitra fanidiana rivotra ho an'ny fiasan'ny rivotra sy ny fiarovana fanampiny.
Vera telo misy spacer roa
Vera telo misy spacer roa ho an'ny fampisehoana avo lenta sy insulate thermal. Tondra-drano mafana lehibe kokoa ho an'ny fampisehoana hafanana tsara kokoa.
Kitapo sy fehiloha, famehezana avo
Atsofohy amin'ny rindrina sy fehiloha
Fihetsiketsehana amin'ny rivotra
Atsofohy amin'ny endriny madio sy lamaody ny volavola sy fehiloha. Gaskety mitambatra EPDM ho an'ny fanamafisana ny rivotra sy ny fahateren'ny rano.
Ny teboka mihidy sy mahatohitra Pry dia manome fiarovana fanampiny ary manatsara ny fahombiazan'ny fanoherana ny enta-mavesatra ho an'ny fahamafisan'ny rivotra sy ny fahateren'ny rano. Ny tahony tsy misy fotony dia manome fiainana miaina milamina miaraka amin'ny fisehoana kely indrindra, tsipika famolavolana malefaka ary fandidiana mangina. Ireo mpampiasa dia afaka mahazo toky amin'ny fiarovana ny varavarankely na dia amin'ny badclimate faran'izay tsy misy fitaovana azo antoka aza.
Teo aloha: Rafitra famolavolana Bi
Manaraka: Rafitra fampiakarana Slim & Slide